पैसाको क’मी भइरहन्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपायहरु : – Sadhaiko Khabar
पैसाको क’मी भइरहन्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपायहरु :
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ११, २०७८ समय: ६:५२:०६
एजेन्सी / मानिसको जिवनमा पैसा सबै थोक हो’इन तर धेरै थोक भने हो । पैसाले मानिसले धेरै आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ । अब नयाँ वर्ष २०२२ आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । आउने वर्षले आफ्नो जीवनमा खुशी ल्याओस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ ।
धेरै प्रगति गर्नुहोस् र आर्थिक सम’स्याको सा’मना नग’र्नुहोस् । ज्योतिष शास्त्रमा केही यस्ता उपायहरु बताईएको छ, जसलाई गर्नाले आर्थिक सं’कट मात्र ह’ट्दैन, माता लक्ष्मी सधैं तपाईमाथि प्रसन्न हुनुहुनेछ । ज्योतिर्विद प्रितिका मजुमदारबाट यी उपायहरू बारे जान्नुहोस् ।
१ आफ्नो पर्समा सधैं माता लक्ष्मीको बसेको तस्बिर राख्नुहोस् । यसो गर्नाले धनको सम’स्या ह’ट्छ ।
२ पिपलको पातमा स्वस्तिक बनाउनुहोस् र यसलाई आफ्नो पर्स वा तिजोरीमा राख्नुहोस् । यसो गर्नाले लाभ मिल्नेछ ।
3 रा’तो रङको कागजमा आफ्नो इच्छा लेखेर मन्दिरमा राख्नुहोस्, त्यसपछि दैनिक धूप बा’लेर पूजा गर्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईको मनोकामना पूरा हुनेछ ।
४ पर्समा चामलको केही दाना सधैं राख्नुहोस् । ध्यान राख्नुहोस् कि चामलको दाना भाँ’च्नु हुँ’दैन । यसो गर्नाले अना’वश्यक धनको ब’र्बादी रो’किनेछ ।
५ आमाबुवा वा घरका कुनै ठूलाबाट पैसा आयो भने खर्च नग’र्नुहोस् । यो पैसालाई वरदानको रूपमा लिनुहोस् र यसलाई आफ्नो पर्समा राख्नुहोस् । यदि स’म्भव छ भने, यो धनमा केसर वा बेसारको तिलक लगाउनुहोस् र यसलाई तिजोरीमा राख्नुहोस् । यसो गर्नाले सधैं समृद्धि रहनेछ ।
६ नयाँ वर्षको पहिलो दिन भगवान गणेशको मन्दिरमा जानुहोस् । गणेशजीलाई लड्डू चढाएपछि गरिबहरूलाई प्रसाद बाँड्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईको आर्थिक कार्य सम्पन्न हुनुका साथै व्यापारमा पनि उन्नति हुनेछ ।
७ सबैभन्दा मुख्य कुरा तपाईं आफ्नो मर्यादा र अनुशासनमा रहेर आफ्ना कामहरु वा पेशा व्यवसायलाई पूर्ण विश्वास र नियमपूर्ण अभ्यासका साथ अगाडि बढाइ रहनुहोस् । अनाव’श्यक फ’जुल खर्च नग’र्नुहोस् । त्यसरी ब’चेको पैसा तपाईंलाई दुः’खमा काम लाग्छ ।